Beydhabo: In Ka Badan 200,000 oo qof oo daacuun laga tallaalay
Photo | Tallaalka daacuunka wuu ku cusub yahay Soomaaliya/Jaamac Joofane/Ergo
Radio Ergo 11 May, 2017 BAY
(ERGO) - Dad ka badan 200,000 oo qof ayaa tallaalka daacuunka ee afka laga qaato lagu siiyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ololahan oo shalay la soo gabagabeeyay ayaa socday toddobadii maalin ee u dambeeyay. Wuxuu jawaab u yahay kiisas cudurka daacuunka ah oo tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan lagu arkay deegaanno ka tirsan Soomaaliya.
Wejigii koowaad ee ololahan tallaalka oo lagu daah-furay isbitaalka magaalada Baydhabo ayaa gaaray 212,794 qof. Waxaa fulinayay shaqaale loo tababaray bixinta tallaalka, kuwaas oo dadka ugu tagayay guryaha, goobaha la iskuugu yimaado iyo xeryaha lagu barakacay.
Isu-duwaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ee gobolka Bay, Dr. Yuusuf Barre Maxamed ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in tallaalkan oo ka hortag ah ay iska kaashadeen wasaaradaha caafimaadka heer gobol iyo heer federaal iyo hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO).
Olelahaan oo bar-tilmaameedkiisu ahaa 224,000 oo qof ayaa u muuqda mid guuleysatay marka la eego tirada harsan oo ah 11206 oo qof oo uu isuduwuhu sheegay in loo gaari waayay sababo la xiriira dadka qaar oo diida qaadashadiisa iyo beerdaraha ku dhaca dhibcaha xilliga lagu gudo jiro tallaalka.
Tallaaka waxaa barbar socday olole waciyi gelineed oo dadka loogu sheegayay kahattarta cudurkan iyo faa’idada uu leeyahay tallaalka ka hortagga ah, taas oo gacan ka geysatay in la gaaro tiradan. “Gawaari Ayaan ku xirnay cod-baahiyeyaal waaweyn, idaacadaha ayaa farriimo ka siideynayay iyo kooxo aan u tababarna oo dadka guryaha ku booqnayay” ayuu yiri Dr. Yuusuf
Wejiga labaad ee tallaalka oo isna socon doona todobo maalin ayaa billaaban doono 21ka bishaan. Qofka labada marba tallaalka qaata ayaa wuxuu awood u yeelanayaa 85% inuu ka badbaado cudurka daacuunka shanta sano ee soo socota.
Tallaaka ayaa gaaray 64% dadka barakacayaasha ah ee ku nool xeryaha magaalada Beydhabo, si dadka dhiman loo gaarsiiyo tallaalka, wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koofur Galbeed ayaa dalbatay dhibcooyin tallaalka ah oo dheeraad ah oo si gaar ah loo siin doono barakacayaasha aan wali helin tallaalka. 157000 oo qof ayaa lagu qiyaasaa dadka ku soo barakacay Beydhabo iyo deegaannada ku xeeran.
Qoyska Sacdiyo Sayid Cali oo ka kooban; iyada, afar caruur ah oo ay dhashay iyo aabahood, oo ku nool xerada barakacayaasha ADC2 ee Beydhabo waxa ay dhammaanba qaateen tallaalka ka hortagga daacuunka. Waxa ay ka walwashay in carruurteeda uu cudurkan ku dhaco maadaama uu wiilkeeda yar ee labada sano jiro uu shubanku ku dhacay laba jeer oo ay isbitaalka la gashay. “Dhalinyarada talaalka wadey waxay noo shegeen in qofkii la tallaalo uusan daacuun ku dhaceynin, cudur xun waaye”.
Sacdiya ayaa raacsiisay: “shuban ayaa wiilkeyga ku dhacay laba jeer runtii waa ka walwalnay ilaa dhaqaatiirta noo sheegeen inuu shuban caadi ah yahay”.
Xabiibo Ibraahim Isaaq oo ka soo barakacday Qansaxdheere waxa ay dhashay sagaal carruur ah oo ay kula nooshahay xerada barakacayaasha ADC2 ee Beydhabo waxa uu tallaalku soo gaaray iyada oo isbitaalka kula jirto laba carruur ah oo ay dhashay oo uu shubanku ku dhacay. “inaga oo xaaladdaan ku jirto hadduu daacuun inoo darsamo waa halis sidaas darteed anigoo isbitaalka ku jiro Ayaan qaatay tallaalka, walaasheeyna waxaan u sheegay in ay carruurta tallaalsho”.
Si lamida Beydhabo, tallaalka waxaa laga fuliyay Muqdisho, Beledweyn, Jowhar iyo Kismaayo